Baro..Waqtiga Ugu Fiican Ee Tahay In Habeenkii La Seexdo | Xaqiiqonews
Baro..Waqtiga Ugu Fiican Ee Tahay In Habeenkii La Seexdo
Marka laga hadlaayo “hurda habeenkii” waxaa jira su’aalo dad badan is weydiiyaan: waa xilligee waqtiga ugu fiican in la seexdo? maxaa muhiim ah in aan qabto hurdada ka hor?
7 ama 8 saacadood oo hurdo ah, waa talooyinka ay bixiyaan dhaqaatiir badan laakiin marka ay timaado saacadaha hurdada iyo waqtiga ay tahay in qofka seexdo ama soo kaco waa in aan xisaabta ku darsanaa “kala duwanaashaha da’da”.
Guud ahaan waa arin iska caadi ah in jirka shaqadiisa ay hoos u dhacdo mar walbo oo mugdiga habenkii sii bato, sidoo kale jirka ay kor u soo kaca marka qoraxda soo baxdo.
Daraasad lagu sameeyey 1,970 qof oo Jabaaniis ah, baarayaasha ayaa soo jeediyey in fiican tahay hurdada “xilliga hore ah”.
Daraasadda ayaa shaaca ka qaatay in dadka firaashka taga “waqtiga dambe” ay badan tahay in laga helo calaamadaha cudurada niyad jabka iyo walwalka.
Sidoo Kale Aqri: Waano Qaali Ah..Qaabkan U Hurud Xilliga Kuleylaha Ah
Dr Aymen Sakly oo u waramay wakaaladda wararka turkiga ee “Anadol” waxa uu soo jeediyey in saacadaha u dhaxeeya 20:30 ilaa 23:00 ay yihiin waqtiga ugu fiican ee hurdada, madaama xilligaasi ay tahay waqtiga ugu badan ee jirkeena uu soo daayo hoormoona melatonin, kaasi oo kor u qaada tayada hurdada.
Dhatqarka ayaa sidoo kale ku taliyey in qofka hurdada ka hor uu cadiyeysto, soona qubeysto, waana in qofka uusan cunin wax cunto, iyo cabitaanada jirka kiciya ee shaaha iyo qahwada fiidkii ka dib.
Qolka hurdada ayuu dhaqarka soo jeediyey in uu noqdo mid jawi fiican oo hurdada ku fiican, islamarkaana laga khafiiyey ama laga damiyey nalalka iftiinka badan.